Fiatrehana ny fanadinam-panjakana Mihazakazaka mampanao cours ireo ny mpampianatra
Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny zavatra mety hisy eto amin’ny firenena mikasika ny fampianarana noho ny firongatry ny aretina coronavirus.
Mbola ady hevitra be eo amin’ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra sy ny sekoly ary ny fanjakana mantsy ilay fanohizana ny fampianarana na tsia, antony manosika ireo mpampianatra sasany hihazakazaka amin’ny fampanaovana cours . Ireo ankizy hiatrika ny fanadinam-panjakana toy ny CEPE sy ny BEPC ary baka no tena voakasik’izany izay tsy misy ny sara-pisoratana anarana raha mora ihany koa ny ekolazy. Nanomboka ny 04 mey lasa teo ny ankamaroan’ny fisoratana anarana amin’izy ireny raha amin’ity tapaky ny volana mey ity kosa no hanomboka ny fampianarana. Izany no hatao moa dia hahafahan’ireo mpampianatra mameno ny banga, indrindra nanomboka tamin’ny volana martsa no nankaty izay tsy nahazoany karama isam-bolana intsony. Tsiahivina moa fa ireo mpampianatra eny anivon’ny sekoly tsy miankina no tena mitondra faisana amin’izany.